“Namootni guyyaa tokkoofillee na waliin shaayii dhugan laakkoofsi baankii isaanii uggurameera, – Kichuu
HomeAfaan OromooNews“Namootni guyyaa tokkoofillee na waliin shaayii dhugan laakkoofsi baankii isaanii uggurameera,
“Namootni guyyaa tokkoofillee na waliin shaayii dhugan laakkoofsi baankii isaanii uggurameera, anga’onni wajjin waan meeqa hojjenne garuu jalaa hin ugguramne,”
jechuun namni siyaasaa Jawaar Mohaammad mana murtiitti dubbate.
Manni murtii olaanaa Federaalaa dhadhachi Araadaa, ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa hordofee namoota to’annoo jala oolan, kanneen galmee obbo Jawaar Mohaammad fa’a jalatti himataman dhimma qabeenya isaanii uggurame ilaalee ooleera.
Abukaatota isaanii keessaa tokko kan tahan Dr. Tokkummaa Dhaabaa BBC’tti akka himanitti, ajaja manni murtii dabarseen: abukaatonni baasii tokkoon tokkoon qabeenyi isaanii jalaa ugguramee jireenyaaf isaan barbaachisu barreeffamaan mana murtiif dhiheessuu himan.
Shakkamtoonni qabeenyi isaanii kan akka herreega baankii, konkolaattonnii fi qabeenyi OMN uggurri irra kaahame dabalatee baasii isaan barbaachsiu kan akka nyaataf, mana kiraatiif, liqii baankii fi kanneen biroo dabalatee akka gadhiifamuufif gaafachuu himan.
Abbaan Alangaa gama isaatiin baasiin abukaatonni dhiheessan ragaadhaan kan hin deeggaramnee fi qabeenyi OMN deebi’uu hin qabu jechuun falmuu himan.
Namootni himataman maal jedhan?
Dhadhacha har’aa irratti kan dubbatan Obbo Baqqalaa Garbaa qabeenyi isaanii konkolaataa dabalatee kan jalaa ugguramee jiru seeran ala waan ta’eef gadhiifamuufii akka qabu dubbatan.
“Ani waggoota 37’F hojii mootummaa nama hojjetedha. Namni wagga kana hunda hojjete akkamitti konkolaataa dulloomtuu kana qabaata jechuun sirrii miti.
Uummanni kiyya gaafan gara Naqamtee fi Adaamaa deeme konkolaataa meeqan akka nasimatan argitanii jirtu. Biyya alaattis konkolaataa badhaafameen jira. Kanaaf konkolaataa dulloomtuu kana horatte jedhanii ugguruun sirrii miti,” jedhan. Kanaan alattis konkolaataan kiyya kuni yakka ittiin himatame keessatti kan hin hammatamnee fi herreegni baankii keenyas kan uggurame maatii kiyya rakkisuu fi ana dadhabsiisuuf itti yaadameeti jechuun dubbatan.
Dhadhacha har’aa irratti obbo Jawaaris carraa dubbachuu argataniin qabeenyi isaanii mana isaanitii fudhatame karaa seera qabeessan kan galmaa’e osoo hin taane bifa saamichaatu narratti raawwatame jedhan.
“Mana kiyya keessaa qabeenyi kiiyya kan akka birrii 100,000 ol warqii, sa’aatii fi badhaasni meedaaliyaa adda addaa ani argadhe poolisiin fudhatee kan ofii godhate.
Qabeenyi kuni ragaa ta’ee narratti hin dhihaanne, naafis hin deebine maalifan saamama,” jechuun gaafataniiru.
Kanaan alattis namootni isaan wajjin guyyaa tokkoofilee shayii dhugan herreegni baankii isaanii ugguramee angaa’onni waliin waan hedduu gochaa turre garuu nagaan jiraatus jedhan.
“Namoota amma aangoo irra jiranii biyya bulchan shaayii dhuguu miti waan baayyee wajjin gochaa ture yoo dhuguma ugguruun sirrii ta’e kansaanii maaf hin ugguramne?
Isaan har’a nu moo’anii nubitaa jiru, nutimmmoo boru filannoodhaan moonee isin warra haqaa kana waliin hojjenna. Akkasitti hubadhaatii seera qofaa hojjedhaa,” jechuu isaaniis Dr. Tokkummaan himaniiru.
Manni murtiis falmii uggura qabeeya himatamtootaa irratti dhihaate kanarratti deebii abukaatotaa dhagahuuf gaafa onkololeessa 24tti beellama qabateera.
Herregni baankii Obbo Baqqalaa Garbaa, gaazexessaa Mallasaa Dirroibsaa fi kan obbo laa Jawaar mahaammad nama torbaa jalaa ugguramuun rakkachaa akka turan abukaatoon isaanii kana dura BBCtti himanii ture.
Poolisiin Jawaar Mohaammad, Obbo Baqqala garbaa dabalatee namoota 12 biroo ajjeechaa Hacaaluu booda hookkara uumuun, reeffa Hacaaluu Finfinneetti deebisuun, ajjeechaa poolisiifi yaalii ajjeechaa qondaaltota mootummaan shakkuun to’atu ibseera.
Dhaddacha dhiyaataa turan irratti Obbo Baqqalaa Garbaa fi Obbo Jawaar Mahaammad yakka hojjennee osoo hin taane dhimma siyaasaaf waan hidhamne jechuun himaa turan.
Maddi:- BBC Afaan Oromoo